Heath Ledger တစ်ယောက် America မြေပေါ်ကို စခြေချတော့ သူစတွေ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ သူတွေထဲမှာ Steve Alexander လည်းပါတယ်။ Steve Alexander က နောက်ပိုင်းမှာ Heath ရဲ့manager ဖြစ်လာသလို အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေထဲက တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်လာတယ်။ အဲ့ဒီ့ညက သူတို့နှစ်ယောက်က ကားတစ်စီးပေါ်မှာ။ Steve Alexander က သူ့client ဖြစ်တဲ့ Heath ကို သရုပ်ဆောင်သက်တမ်းဘယ်လောက် ရှိပြီလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ Heath က သေချာစဉ်းစားပြီးတော့ အနှစ် ၂၀ လောက်ရှိပြီလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီ့တော့ Steve Alexander က ရယ်ရယ်မောမောနဲ့မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲလို့ပြန်မေးတော့ Heath က ၂၀ လို့ဖြေခဲ့တယ်။ Heath က မွေးကတည်းက သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ သရုပ်ဆောင်ပြီးနေ နေခဲ့တာလား။ မေးခွန်းက ကျွန်တော်တို့တွေလည်း ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေ မှာ မွေးဖွားလာကတည်းက ဟန်ဆောင်ပြီး နေထိုင်နေကြတာလား။
ကျွန်တော်တို့တွေ Heath Ledger ကို အရမ်းကြိုက်ကြတယ်။ သူ့ရဲ့fans တွေဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြွေးကျော်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ သူ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိ ဘယ်လောက်သိခဲ့ကြသလဲ။ အခု I am Heath Ledger ဆိုတဲ့ documentary က ကျွန်တော်တို့တွေ သိပ်မသိခဲ့ရတဲ့ သူ့ဘဝနဲ့သူ့အကြောင်းအများစုကို တင်ပြထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအထိတော့ သိခဲ့ရတယ်လို့ ကျွန်တော်မထင်မိဘူး။ Heath က အရမ်းတော်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်။ အရမ်းကို ထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူ့အကြောင်း၊ သူ့ဘဝ၊ သူ့ခံစားချက်နဲ့သူ့ခံယူချက်တွေကို ဘယ်သူမှ အပြည့်အစုံသိနိုင်ခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒီ Documentary ကနေ ကျွန်တော်တို့ဘာတွေသိခဲ့ရသလဲဆိုတော့ ပထမအချက်က Heath နဲ့သူ့လက်ထဲက cameras တွေအကြောင်းပဲ။ သူက ဘယ်သွားသွား camera တစ်လုံးကို လက်ထဲကနေ ယူသွားတတ်တဲ့သူမျိုး။ သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဘယ်လိုပြောပြထားသလဲဆိုတော့ တစ်ရက်သူတို့နှစ်ယောက် အိမ်အပြင်ကိုတစ်နေရာကို ခဏထွက်ကြတော့ Heath က သူ့ကို camera ယူလာခဲ့ဖို့လှမ်းပြောလိုက်တယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းက အဲ့နေရာနဲ့ဒီနေရာကြားလေးထဲမှာ ငါကဘာကို သွားရိုက်ရမှာလဲလို့ဆိုတော့ Heath က ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ၊ နောက်ဆုံး မင်းခြေဖဝါးတောင် မင်းပြန်ရိုက်လို့ရတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။
Heath က အမြဲတမ်းလိုလို camera နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က အရာတွေကို ရိုက်ကူးလေ့ရှိတယ်။ ရိုက်စရာမရှိရင် သူ့ကိုယ်သူပြန်ရိုက်တယ်။ သူ့ကိုယ်သူ ပြန်မှတ်တမ်းတင်တယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာ မမှားရင် သူက အချိန်အများစုမှာ သရုပ်ဆောင် လေ့ကျင့်နေတာ။ သူ့ကိုယ်သူ ပြန်ရိုက်ကူးမယ်။ ပြီးရင် သူပြန်ကြည့်ပြီး ဘာလိုအပ်တယ်ဆိုတာ သူပြန်စဉ်းစားပြီး ဒီ့ထက်ပိုကောင်းအောင် လုပ်တာမျိုး။ ဒီ documentary ထဲမှာ Director Ang Lee ကို မေးထားတဲ့ interviews တွေလည်းပါတယ်။ Ang Lee ရဲ့ခံယူချက်က ရိုက်ကူးရေးအချိန်မှာ သရုပ်ဆောင်တွေဟာ သူတို့သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ပုံတွေကို screen ပေါ်မှာ လာပြန်မကြည့်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ ခံယူချက်။ ထို screen က ဖန်တီးသူတွေနဲ့ပရိသတ်ပဲ ကြည့်ရမယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေက ထို screen ကိုလာပြန်ကြည့်ရင် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ လိုအပ်ချက်တွေရှိနေမှာဆိုတဲ့ ခံယူချက်ကို လက်ခံထားတဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်ချင်တော့ Heath နဲ့Brokeback Mountain ကို ရိုက်ကူးတော့ Heath က အမြဲလာလာပြန်ကြည့်တယ်တဲ့။ သူ့သရုပ်ဆောင်တာ ဘာလိုအပ်နေလဲ၊ ဘယ်လိုနေလဲဆိုပြီးလာကြည့်တာပေါ့။ ဒါကို အစက Director Ang Lee က သဘောမကျဘူး။ ဒီမှာတင် ကတောက်ကဆတွေဖြစ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ Heath ကလည်း ဂရုမစိုက်ဘူး။ သူနည်းနဲ့ပဲ သူဆက်သွားတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ Ang Lee လက်ခံသွားတယ်။ Heath က တစ်ခါပြန်လာကြည့်ပြီး နောက်တစ်ခါ ထိုဇာတ်ဝင်ခန်းကို ပြန်ရိုက်တဲ့အခါ ပိုပိုကောင်းလာတယ် ဆိုပြီး Ang Lee တစ်ယောက် သဘောကျလက်ခံသွားတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ဒီ documentary ကြည့်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်သိလိုက်တာ Heath သာ ယနေ့အထိ အသက်ဆက်ရှင်နေအုံးမယ်ဆိုရင် ရုပ်ရှင်တစ်ကား (ဒါမှမဟုတ်) နှစ်ကား (ဒီ့ထက်လည်း ပိုချင်ပိုမယ်) ကို ကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာအဖြစ်နဲ့ ရိုက်ကူးပြီးနေလောက်ပြီဆိုတာပဲ။ နောက်တော့ ထိုအဖြေကို အခု documentary က အတည်ပြုသွားခဲ့တယ်။ Heath က feature ရုပ်ရှင်ကြီးတစ်ခုကို မရိုက်ခဲ့ရသေးပေမဲ့ music video ၄ လောက်ကို Director လုပ်ပြီး ရိုက်ကူးခဲ့တယ်။ နာမည်အကြီးဆုံးတစ်ခုကတော့ သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေရင်းကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် Ben Harper ရဲ့Morning Yearning ဆိုတဲ့ သီချင်းကို video ရိုက်ပေးခဲ့တာပဲ။ ဒီနေရာမှာတင် Heath နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သိလာတဲ့ အချက်တစ်ခုက ဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီး Heath ရဲ့ရူးသွပ်မှုတွေအကြောင်းပဲ။ Heath ရဲ့Idols တွေထဲမှာ Nick Drake ဆိုတဲ့ English အဆိုတော်တစ်ယောက် ရှိတယ်။ Nick Drake ဆိုတဲ့အဆိုတော်ကလည်း အသက် ၂၆ နှစ် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်။ (ဒီနေရာမှာ topic နဲ့မဆိုင်ပဲ ပြောရမယ်ဆိုရင် Nick Drake ဆိုတဲ့အဆိုတော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးက ရန်ကုန်မြို့မှာ တွေ့ခဲ့ကြတာ။ 1930 ဝန်းကျင်လောက်က Nick Drake ရဲ့ဖခင်က Bombay Burmah Trading Corporation မှာ engineer အဖြစ်လုပ်နေခဲ့ရင်း Nick Drake ရဲ့မိခင်နဲ့တွေ့ခဲ့ကြပြီး ရန်ကုန်မှာပဲ လက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်။ Nick Drake ကိုလည်း 1948 ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန်မှာပဲ မွေးဖွားခဲ့တာ။ 1950 လောက်မှ သူတို့တစ်မိသားစုလုံး England ကို ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့တာ။ ထူးဆန်းတာ တစ်ခုက Nick Drake လည်း အသက် 26 နှစ်လောက်မှာ သောက်ဆေးတွေနဲ့overdose ဖြစ်ပြီး ဆုံးသွားခဲ့တာ။) Heath က Nick Drake နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်ထိ ရူးသွပ်ခဲ့သလဲဆိုရင် Nick Drake အကြောင်းကို သူကိုယ်တိုင် Director လုပ်ပြီး documentary တစ်ခုရိုက်ဖို့အထိ ဆန္ဒပြင်းပြခဲ့တယ်။ (ဒါပေမဲ့ Nick Drake ရဲ့Black Eyed Dog ဆိုတဲ့သီချင်းကိုတော့ သူကိုယ်တိုင် ဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ဒါရိုက်တာအဖြစ် music video ရိုက်ကူးခဲ့တယ်။)
Heath တစ်ယောက် Nick Drake အကြောင်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့အစီအစဉ်က ဘာဆက်ဖြစ်သွားသလဲတော့ မသိလိုက်ဘူး။ ဆန္ဒပဲရှိခဲ့ပေမဲ့ သူတစ်ကယ် မရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့ဘူူး။ နောက်တော့ ဒါရိုက်တာအဖြစ်နဲ့ပထမဆုံးရိုက်ကူးမဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကား သူ့မှာ ရှိလာခဲ့တယ်။ ဇာတ်လမ်းနာမည်က The Queen's Gambit ။ ဇာတ်လမ်းက Chess စစ်တုရင်ကစားပွဲတွေမှာ တော်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အကြောင်း။ ကျွန်တော်ကြားမိသလောက် Heath က မင်းသမီး Ellen Page ကိုတောင် ခေါင်းဆောင်ဇာတ်ကောင်နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့အထိ ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ Heath က ဒီဇာတ်လမ်းကို ရိုက်ကူးဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာလည်း သိပ်တော့ မထူးဆန်းဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူကိုယ်တိုင်က စစ်တုရင်ထိုးတာ အရမ်းဝါသနာတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့လို့ပဲ။ ဒီ documentary ထဲမှာ သူ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်က ဘာပြောခဲ့သလဲဆိုတော့ Heath တစ်ယောက် အသက် 10 နှစ်၊ 11 နှစ်လောက် အရွယ်လောက်ကတည်းက စစ်တုရင်ပွဲတွေမှာ သူ့အဖေထက် အကွက်5ကွက်၊6ကွက်လောက် အသာစီးရနေတတ်ပြီး Heath ကို နိုင်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ ပြောသွားခဲ့တယ်။ သူရိုက်ကူးချင်ခဲ့တဲ့ ထို The Queen's Gambit ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးရေးမစတင်ခင်မှာတင် Heath က ကျွန်တော်တို့ကို ခွဲခွာသွားခဲ့တယ်။
ဒီ Documentary ထဲမှာ Aussie သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ Ben Mendelsohn တို့Naomi Watts တို့ရဲ့interviews တွေလည်းပါတယ်။ Heath က A Knight’s Tale ဇာတ်ကားနဲ့အရမ်းကို အောင်မြင်သွားတယ်။ ဒီမှာတင် LA မှာ သူအိမ်တွေဘာတွေ ပိုင်လာတယ်။ Ben Mendelsohn တို့Naomi Watts တို့ပြောတဲ့ စကားအရဆိုရင် Heath က သူ့အိမ်ကို လူတိုင်းအတွက် တံခါးမရှိ၊ ဓားမရှိ ဖွင့်ထားခဲ့တယ်တဲ့။ Aussies သရုပ်ဆောင် အများစုလည်း အဲ့ဒီ့အချိန်တုန်းက သူ့အိမ်မှာ နေခဲ့ဖူးကြတယ်။ အိမ်မရှိသေးတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ ခဏလာနေကြတယ်။ အိမ်ရှာနိုင်တဲ့အနေအထား ပြန်ရောက်သွားကြရင် ပြန်သွားကြတယ်။ သူ့အိမ်မှာ ကြည့်လိုက်ရင် လူတွေအမြဲပြည့်နေတာပဲတဲ့။ Ben Mendelson တို့Naomi Watts တို့က သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း Heath အိမ်မှာ နေခဲ့ဖူးတယ်လို့ပြောသွားတယ်။ တစ်ခြားသရုပ်ဆောင်တွေထဲမှာဆိုရင် မင်းသမီး Rose Byrne တို့တောင် နေခဲ့ဖူးသေးတယ်။ (Heath က Rose Byrne နဲ့Two Hands ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားမှာ အတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးတယ်။) Heath က တစ်ကယ်ကို သဘောထားပြည့်ဝတဲ့ သူတစ်ယောက်။ Heath က Naomi Watts နဲ့ကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်။ တစ်ကယ်တော့ Naomi Watts က Heath ထက် အသက် 11 နှစ်တောင် ပိုကြီးတယ်။ ပရိသတ်တွေအကုန်သိကြပေမဲ့ အခု documentary ထဲမှာတော့ Naomi Watts က သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ မပြောသွားခဲ့ဘူး။ Heath က ဘယ်လိုတော်တဲ့သူ၊ ဘယ်လိုကောင်းတဲ့သူဆိုတာတွေကိုပဲ သူမရဲ့စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ပြောသွားခဲ့တယ်။
တစ်နာရီခွဲစာလောက်ကြာမြင့်တဲ့ အခု မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်ကို ကျွန်တော်တို့တွေ ကြည့်ခဲ့ကြတာလဲ။ Documentary ဆိုတာ ရုပ်ရှင်မဟုတ်ဘူး။ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တစ်ခု မဟုတ်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ Heath ကို အမြဲအမှတ်ရနေစေချင်လို့။ သူဖန်တီးခဲ့တဲ့ အနုပညာတွေ၊ သူဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘဝတွေ၊ သူယုံကြည်ခဲ့တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို အမှတ်တရ ရှိနေစေချင်လို့ပဲ။
အခု မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားသလောက် ပြည့်စုံတယ်လို့မခံစားခဲ့ရဘူး။ ကျွန်တော်က Heath နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီ့ထက်အများကြီး ပိုသိချင်နေခဲ့လို့လည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်လောက်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် Heath ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူ့ရဲ့Heath အစစ်ကို ဖုံးကွယ်ထားခဲ့ပြီး လူတွေ မသိသေးခဲ့တဲ့ အချက်တွေလည်း ရှိကောင်းရှိနေနိုင်မယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အခု တစ်နာခွဲလေးဟာ အရမ်းကို တိုတောင်းလွန်းတယ်။ အင်းပေါ့လေ။ လူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကြီးကို မိနစ် ၉၀ လောက်နဲ့တော့ ဘယ်ပြည့်စုံပါ့မလဲ။ နောက်ထပ် မပြည့်စုံတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုကို ပြောရမယ်ဆိုရင် Heath ရဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး Heath သမီးလေး Matilda လေးရဲ့အမေဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသီး Michelle Williams ရဲ့ပါဝင်မှု မရှိခဲ့ခြင်းပဲ။ Michelle က Heath နဲ့လမ်းခွဲပြီးကတည်းက Heath နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာအဆိုမှ public မှာ မပြောပြခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခု documentary ထဲမှာ သူ့အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ၊ သူ့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးက Heath နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကောင်းတဲ့အချက်တွေ၊ ကောင်းတဲ့ အမှတ်တရတွေကိုပဲ ပြောသွားခဲ့ကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Heath နဲ့ပတ်သက်ပြီး မကောင်းတဲ့အချက်ဆိုတာ သူတို့မှာ ပြောစရာမရှိလို့ပဲလို့ ကျွန်တော်ကတော့ ယုံကြည်တယ်။
လို့ပြောပြီး ဝတ်ထားတဲ့ မျက်နှာဖုံးကို ချွတ်ပြလိုက်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးတစ်ခုကနေစပြီး ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်က ဗီလိန်တွေအပေါ် ပရိသတ်မြင်တဲ့ အမြင်တစ်ခုဟာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ အားကျတဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူး။ နားလည်ပေးလိုက်တဲ့အမြင်လည်း မဟုတ်ဘူး။ လူဆိုးနဲ့လူကောင်းကို တန်းတူမြင်လိုက်တဲ့ အမြင်တစ်ခု သဘောမျိုးပဲ။ Joker ဟာ သူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံး အောင်မြင်မှုပဲ။ ပြောရရင် လူသားတစ်ယောက်အတွက် အကြီးဆုံး အောင်မြင်မှု။ Heath က လောကကြီးက မထွက်ခွာသွားခင်မှာ အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကို ရရှိသွားခဲ့တယ်။ ခပ်မြင့်မြင့်တစ်နေရာကနေ ကျွန်တော်တို့တွေကို ငုံ့ကြည့်ပြီး ပြုံးပြချင် ပြုံးပြသွားခဲ့မယ်။ နောက်တော့ သူကျွန်တော်တို့အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ပြီး ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်တော့မှ မတွေ့ရတော့မဲ့ နေရာတစ်ခုကို ထွက်သွားတော့တယ်။
လူသားတိုင်းမှာ ပုံစံ ၃ မျိုးရှိတယ်လို့တော့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အပြင်မှာ တစ်ခြားသူတွေကို ဟန်ဆောင်ပြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ ပုံစံ၊ လူတွေမသိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲ ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံအစစ်၊ နောက်ဆုံးတစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တောင် သေချာမသိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံနောက်တစ်မျိုး။ ဒီ documentary ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှ Heath ရဲ့ပုံစံကို ကျွန်တော်တို့ပိုနားလည်လာတယ်။ Heath ရဲ ့ဘဝကို ဝင်ရောက်ခံစားတတ်လာခဲ့တယ်။ Heath ကိုကြည့်လိုက်ရင် အမြဲတမ်း လန်းဆန်းတက်ကြွနေခဲ့တဲ့ လူသားတစ်ယောက်။ သူက အိပ်ရေးလည်း မက်ခဲ့တဲ့ သူဟုတ်ပုံမရဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း နောက်တော့ သူအိပ်ရေးတွေ ပျက်လာပြီး အိပ်မပျော်တဲ့ ရောဂါမျိုးတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ဆီ ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ ပိုဆိုးလာတာတစ်ခုက The Imaginarium of Doctor Parnassus ရိုက်ကူးရေးမှာ London ညတွေရဲ့အအေးဓာတ်တွေကြောင့် pneumonia တွေလည်း ရလာတယ်။ သူသောက်နေတဲ့ အိပ်ဆေးတွေကလည်း အစွမ်းမထက်လာတဲ့ အဆုံးသတ်တစ်ခုမှာ Heath။
သေသောသူ ကြာရင်မေ့ ဆိုတဲ့ စကားပုံဆိုရိုးစကားတစ်ခု ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေမှာရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လောကကြီးကို နှုတ်ဆက်ခွဲခွာသွားခဲ့တာ 10 နှစ်ကျော်တောင် ကြာမြင့်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ အခုထိ မေ့လို့မရသေးတဲ့ လူတစ်ယောက် ရှိနေတယ်။ သူ့နာမည်ကတော့ Heath Ledger ။
Everyone you meet always asks if you haveacareer, are married or ownahouse as if life was some kind of grocery list. But nobody ever asks if you are happy.
- Heath Ledger (1979 – 2008).